Masuuliyiinta gobolka Hiiraan oo ka hadlay dil xalay ka dhacay Beledweyne. – The Voice of Northeastern Kenya
Masuuliyiinta gobolka Hiiraan oo ka hadlay dil xalay ka dhacay Beledweyne.
Wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in Kooxo hubeeysan ay xalay xaafada Howl-wadaag ee degmada Baladweyne ku dileen nin lagu mgacaabi jiray Cismaan Cali maadeey oo loo yaqiinay Cismaan Ganeey kana kamid ahaa shaqaalaha Maaliyada ee maamulka Gobolka Hiiraan.
Dilka Sarkaalkaan ayaa waxa uu ka dhacay aga agaarka Aargada sheikh xasan Barsame ee xaafada howl-wadaag ee magaalda beledweyne,waxaana dilka ka danbeeyey sida wararku ay sheegayaan koox dhalinyaro ah oo baskoolado ku hubeeysnaa kuwaasi oo goobta dilku ka dhacay isaga baxsaday goobta Sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadka deegaanka.
dilka kadib ayaa waxaa goobta gaaray ciidamada amaanka ee gobolka hiiraan waxayna halkaas ka bilaabeen baritaano lagu ogaanayo kooxihii kadanbeyey dilkaasi.
Taliyaha Ciidamada xasilinta Magalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Carab Nuur ayaa sheegay in Sarkaalkaas la dilay xilligii salaada Maqribka isagoo ka soo baxay Shaqada kuna wajahnaa Hooygiisa.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dadkii ka dambeeyay dilkaas ay goobta ka baxsadeen,hayeeshee Ciidamada Amniga magaalada Baladweyne ay wadaan howlgal lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyay dilkaas.
← Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo shir gudoomiyay kulanka Tubta Siyaasada loo dhan yahay.
Wasiirka shaqaalaha oo baaq u diray kalkaaliyayaasha dalka →